မနက်ဖြန်မှာ Xiaomi Mi Max3ကို ကြေညာမလား ? | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone မနက်ဖြန်မှာ Xiaomi Mi Max3ကို ကြေညာမလား ?
ရှောင်မီက Tencent အမည်ရ ဗီဒီယို လူမှုကွန်ရက် ၀က်ဆိုက်မှာ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ပြသလိုက်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ မိုးပြာရောင် ဘူးခွံတစ်ခုကို Mi Home Store မှာ ပြသထားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုရဲ့ အဆုံးမှာ ဇွန်လ ၂၈ ရက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မနက်ဖြန်မှာ ရှောင်မီဟာ ကြေညာမှုတစ်ခုပြုလုပ်တော့မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။
ဘူးခွံမှ မိုးပြာရောင်ဟာ လက်ရှိ ရောင်းချထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းအတွက် အရောင်အသစ်ကို ထုတ်လုပ်ပေးမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Mi Max3ကိုလည်း မိတ်ဆက်ကောင်း မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition လည်း ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက သုံးသပ်ပါတယ်။ အခြား သတင်းအချက်အလက်များတော့ ဗီဒီယိုမှာ မပါရှိတဲ့အတွက် မှန်းဆရခက်ခဲပါတယ်။
Mi Max3ကို ဇူလိုင်လလောက်မှ မိတ်ဆက်မယ်လို့လည်း သတင်းထွက်နေပါတယ်။ Xiaomi က ဒီလထဲမှာပဲ Redmi6Pro နဲ့ Mi Pad4ကို ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလင့်ကနေ Video Teaser ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုဟာ ၁၀ စက္ကန့်သာ ရှိပြီး Xiaomi Mi Home Store ကို ပြသထားပါတယ်။ စတိုးထဲမှာ ရှောင်မီရဲ့ ဖုန်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ရုတ်တရက် မီးမှိန်သွားပြီးနောက် အပြာနုရောင် မီးအလင်း ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ မိုးပြာရောင်ဘူးခွံတစ်ခု ပေါ်လာပါတယ်။ ဘူးခွံမှာ Mi Logo ကို ရေးထိုးထားပါတယ်။ ဗီဒီယို အဆုံးမှာ “this isagift from the future “ လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
မနကျဖွနျမှာ Xiaomi Mi Max3ကို ကွညောမလား ?
ရှောငျမီက Tencent အမညျရ ဗီဒီယို လူမှုကှနျရကျ ဝကျဆိုကျမှာ ဗီဒီယိုတဈခုကို ပွသလိုကျပါတယျ။ ဗီဒီယိုမှာ မိုးပွာရောငျ ဘူးခှံတဈခုကို Mi Home Store မှာ ပွသထားတာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ဗီဒီယိုရဲ့ အဆုံးမှာ ဇှနျလ ၂၈ ရကျကို ဖျောပွထားပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ မနကျဖွနျမှာ ရှောငျမီဟာ ကွညောမှုတဈခုပွုလုပျတော့မယျလို့ထငျရပါတယျ။
ဘူးခှံမှ မိုးပွာရောငျဟာ လကျရှိ ရောငျးခထြားတဲ့ စမတျဖုနျးအတှကျ အရောငျအသဈကို ထုတျလုပျပေးမယျလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Mi Max3ကိုလညျး မိတျဆကျကောငျး မိတျဆကျနိုငျပါတယျ။ Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition လညျး ဖွဈသှားနိုငျတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူမြားက သုံးသပျပါတယျ။ အခွား သတငျးအခကျြအလကျမြားတော့ ဗီဒီယိုမှာ မပါရှိတဲ့အတှကျ မှနျးဆရခကျခဲပါတယျ။
Mi Max3ကို ဇူလိုငျလလောကျမှ မိတျဆကျမယျလို့လညျး သတငျးထှကျနပေါတယျ။ Xiaomi က ဒီလထဲမှာပဲ Redmi6Pro နဲ့ Mi Pad4ကို ကွညောခဲ့တဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလငျ့ကနေ Video Teaser ကို ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဗီဒီယိုဟာ ၁၀ စက်ကနျ့သာ ရှိပွီး Xiaomi Mi Home Store ကို ပွသထားပါတယျ။ စတိုးထဲမှာ ရှောငျမီရဲ့ ဖုနျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ ရုတျတရကျ မီးမှိနျသှားပွီးနောကျ အပွာနုရောငျ မီးအလငျး ပျေါလာပါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ မိုးပွာရောငျဘူးခှံတဈခု ပျေါလာပါတယျ။ ဘူးခှံမှာ Mi Logo ကို ရေးထိုးထားပါတယျ။ ဗီဒီယို အဆုံးမှာ “this isagift from the future “ လို့ ရေးသားထားပါတယျ။
Previous articleFlyme Red အရောင် ထွက်လာတဲ့ Xiaomi Redmi Note 5
Next articleအင်တာနက် ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ Drone စီမံကိန်းကို ရပ်နားလိုက်တဲ့ Facebook